Kalee kiyya hate jechuun dubartiin abbaa warraashee himatte - BBC News Afaan Oromoo
Kalee kiyya hate jechuun dubartiin abbaa warraashee himatte
Goodayyaa suuraa Beekumtii kiyya ala kalee koo na keessa baasan
Bakka tirma yookan gabbara fuudhaa kalee kiyya tokko na keessa hataniiru jechuun poolisiitti waan himatteef abbaan warraa dubartii Hindii fi soddaan ishee tokko to'anno jala oolaniiru.
Hindii Beengaal Dhihaa keessatti wayita dubartiin kun waggaa lamaan dura dhukkuba garaachaan rakkachaa turteetti, dhukkuba yaalii baqaqsanii godhuu barbaadu 'appendics' dha jechuun gocha kana abbaan warra akka qindeesse midiyaan nanno gabaaseera.
Bara 2017 gara dhumaarra qorannoon fayyaa bakka lamatti godhamee dubartiin kun akka kalee tokko hin qabne agarsiise.
Dubartiin kun ammoo abbaan warraa ishees yeroo hedduu tirmaa gaafachaa akka ture himteetti.
Akka aadaa Hindootaatti kaffaltii tirmaa yookan gabbara maatii intalaatu dhiira fuudhuuf kaffala - kun ammo bara 1961 irra eegalee seeraan dhowwameera.
Dhimma tirmaa kanaan walqabatee waggoota dheeraaf abbaan warra ishee miidhaa hedduu irraan gahaa akka ture Riitaa Saankaar midiyaa Hindiitti dubbateetti.
''Abban warraa kiyyaa gara mana yaalaa dhuunfaa Kolkaataa keessatti argamu na geesse, achittis hojjettoonni fayyaa marumaan kiyyarra dhukkuba jiru sana yoo baqaqsinee si wal'aanne ni fayyita jedhanii natti himan,'' jechuun Hinduustaan Taayims jecha ishee waabeffateera.
''Yaalii fayyaa Kolkootaatti godhamee kana eenyutti iyyuu akkan hin himne abban warra kiyya na akeekkachiise ture," jetti.
"Ji'oota muraasa booda fayyaa dhabuu jalqabuu kiyya irraa kan ka'e gara doktoora naannoo mana warra kiyyaa biran deeme," jetti.
Booda irra iskaanii godhameen kaleen kiyya mirgaa akka hin jirre barame. Iskaanii kan biroon qorannoon ammas godhame kanuma mirkaneesse, jechuun dubbatte.
''Kana booda anis maaliif abbaan warra kiyya akkan waa'ee baqaqfamee yaalamuu kiyya namatti hin himneef akka na akkeekachiise bare,'' jechuun Hinduustaan Taayimsitti himte.
''Sababa maatiin kiyya tirmaa inni gaafataa ture kaffaluu hin dandenyeef kalee kiyya hate.''
Inispeektara polisii kan ta'an Udaayshaankaar Ghoosh ''Shira kana keessa gartuu yakka akkanaa dalagantu jira shakki jedhu qabna'' jechuun akka dubbatan gaazexaan 'The Telegraph India' haasaa qondaala kana waabefachuun gabaaseera.
''Dhimmi kun himata seera qaama namaa dabarsanii nama biraa keessatti dhaabuu jalatti akka galmaa'ee fi itti dabalataanis namoota sadii irratti yaalii ajjeechaa fi misirroo dararuun himati irratti banameera,'' jedhu.